नरेन्द्र मोदी किन गए युरोप ? - दर्पण संसार
नरेन्द्र मोदी किन गए युरोप ?
२०७९ बैशाख १९, सोमबार १३:३० बजे
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमणमा गएका छन् । जर्मनी, डेनमार्क र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने गरी मोदी सोमबार जर्मनी पुगेका हुन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भारतमाथि रुसविरुद्ध उभिन निरन्तर दबाव बढिरहेको बेला मोदी युरोप भ्रमणमा गएका हुन् ।
जर्मनीमा मोदीले त्यहाँका चान्सलर ओलफ सोल्जसँग वार्ता गर्नेछन् । मोदी मंगलबार डेनमार्क भ्रमणका लागि कोपनहागन पुग्नेछन् । भेटमा डेनिस प्रधानमन्त्री फ्रेडेरिक्सनसँग हरित साझेदारी रणनीतिको विषयमा छलफल गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आगामी बुधबार मोदी डेनमार्कबाट पेरिस पुग्ने कार्यक्रम छ । रुस–युक्रेन युद्धमा तटस्थ बस्ने कोशिस गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई युरोपेली देशहरूले रुसलाई युद्धबाट पछि हटाउनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नसक्ने बताइएको छ ।